Acropolis, inona izany ary iza no malaza indrindra eran-tany | News Travel
Acropolis, inona izany
Louis Martinez | 07/04/2022 15:00 | kolontsaina, Gresy
Efa nandre momba ny Acropolis of Atenas. Efa namaky momba izany mihitsy aza izahay ary nitsidika azy. Saingy, nanontany tena ianao hoe nahoana izy io no nisy ary inona no asany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny a acropolis, inona izany Ary inona no anjara asany tamin’ny andro fahiny? Avy eo, holazainay aminao ny sasany amin'ireo malaza indrindra.
Acropole Midika hoe “tanàna ambony” amin’ny teny grika. Ary eny tokoa, io no faritra avo indrindra amin'ireo tanàna grika. Nipetraka teo amin'ireo faritra avo sy mideza ireo ny mponina tany am-boalohany mba hiarovana ny tenany amin'ny fanafihan'ny fahavalo. Rehefa nandeha ny fotoana, dia niitatra tany amin’ny faritra ambany kokoa ny tanàna. Saingy ny mponina tao dia nitazona ny acropolis hialokaloka amin'ny fotoanan'ny ady amin'ny hafa polisy mpiara-monina Noho ny toe-javatra nahazo azy ireo sy ny taonany, dia nipetraka izy ireo ireo tranobe misy marika indrindra ary toerana nisy fivoriana lehibe tao. Rehefa voazava ny zava-drehetra momba ny acropolis, inona izany ary inona no nampiasana azy, dia hasehontsika anao ny sasany amin'ireo zava-dehibe indrindra.
1.1 The Parthenon
1.2 Ny Erechtheion of the Acropolis
1.3 Fanorenana hafa amin'ny Acropolis any Atena
2 Acropolis of Corinth
3 Aso Acropolis
4 Acropolis of Pergamona
Tsy isalasalana fa io no malaza indrindra eran-tany. Isan-taona dia mpizaha tany an-tapitrisany maro no mitsidika azy io, izay liana amin'ny halehibeny. Raha ny momba azy dia eo amin’ny havoana mirefy dimampolo amby zato metatra ny haavony. Amin'ny maha te hahafanta-javatra dia holazainay aminao fa antsoina koa hoe Crecopy, ho fanomezam-boninahitra an’ilay mpanjaka Atenianina voalohany: ilay bibilava malaza, ilay crecope.
Satria efa tranainy ny niandohan’ny Acropolis any Atena. Raha ny marina, fantatra, tamin'ny sisan-javatra hita, fa nisy tranainy iray mycenaean tamin’ny arivo taona faharoa talohan’i Kristy sy tamin’ny taonjato fahenina talohan’ny andron’i Kristy sy ny tranainy iray hafa, tokony ho tamin’ny taonjato fahenina talohan’ny androntsika. Na izany aza, ilay fantatsika ankehitriny dia an'ny dingana klasika ny sivilizasiona Helenika. Miorina amin'ny teo aloha, dia naorina indray tamin'ny Pericle (495-429 T.K.), izay nankinin’ny mpanakanto manan-danja toy ny lehibe ny fanamboarana azy Phidias, mpamorona ny sary sokitra an’ilay Parthenon malaza. Ary izany dia mitarika antsika hiresaka momba ny fananganana emblematic indrindra.
Parthenon malaza eo amin'ny Akropolisy any Atena
Vao nanomboka io asa lehibe io izahay. Ny mpanao mari-trano dia Callicrates e Ictinus, izay azo inoana fa nampiasa ny fototry ny tempoly tranainy iray antsoina hoe Hecatompedon. Manodidina ny fitopolo sy telopolo metatra eo ho eo izy io ary voahodidin'ny andry mihoatra ny folo ny haavony. Ankoatra izany, dia eo amin'ny plinth izay idirana amin'ny dingana telo.
Ao anatiny, dia mizara ho efitra roa tsy miankina. Ny atsinanana dia lehibe kokoa ary andry Doric mafy orina no manasaraka ny lohany telo. Ankoatra izany, dia ny trano fandraisam-bahiny sary sokitra malaza amin'ny athéna nataon'i Phidias amin’ny volamena sy ivoara. Amin'ny lafiny iray, ny tandrefana dia manana tsanganana ionika ary natao hitazonana ny haren'ny andriamanibavy. Na izany aza, ny ankamaroan'ny tempoly dia Doric, na dia misy singa iray miavaka aza.
Miresaka aminao izahay frieze lehibe izay eo amin'ny rindrin'ny sambo. Mandra-pahatongan'izany, dia tsy nisy trano Doric nampiasa io toerana io hametrahana azy io. Na ahoana na ahoana, ny frieze dia iray amin'ireo sangan'asa lehibe Phidias. Miaraka amin'ny halavany enimpolo amby zato metatra, dia nanao sokitra olona 378 sy biby 245 tamin'ny marbra izy.
Ny Erechtheion of the Acropolis
Miaraka amin'ny tribune malaza (na stoa) notanan'ny enina sarivongana caryatids, dia iray amin'ireo tranobe malaza indrindra ao amin'ny Acropolis. Tempoly natokana ho an’ireo andriamanitra izy io Poseidon y Athena, fa ho an’ilay mpanjakan’i Atena angano koa erectus, avy eo ny anarany.
Ny tranobe dia nomena ny mpanao mari-trano Menesicles, izay nanaraka ny baikon’i Ionic mba hanorina azy amin’ny marbra avy any amin’ny Tendrombohitra Pentelico. Natao hitazonana ireo vakoka sarobidy indrindra ho an’ny Atenianina izy io. Anisan'izany ny Padiumadium, sarivongana hazon’i Athéna izay, araka ny angano, dia latsaka avy tany an-danitra. Nalevina tao koa ny mpanjaka Crecope ary ny azy erectus. Na ny zanakavavin’ity farany aza, PandosusNisy trano fiangonana izy io.
Fanorenana hafa amin'ny Acropolis any Atena
Tempolin'i Athena Nike
Misy tranobe manan-danja maro hafa ao amin'ny Acropolis, manomboka amin'ny Propylaea, izay, miaraka amin'ny andry Doric lehibe enina, no namorona ny fidirana amin'ny vala. Tokony hitsidika ny Tempolin'i Athena Nike, asan'ny Callicrates ary miaraka amin'ny friezes natokana ho an'ny Ady ara-pitsaboana; ny toerana masin'i Artemis Bauronia, miaraka amin'ny galeriny mirefy valo amby telopolo metatra izay misy ny famokarana varahina ny Troy Horse, ary ny goavana portico de eumenes, naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i JK.
Saingy, ambonin'ny zavatra rehetra, manasongadina ny Theater of dionysus, noheverina ho tranainy indrindra eran-tany. Nisy rihana valo amby fitopolo nosarahan'ny lalantsara boribory sy ny galerie ho an'ny manampahefana. Teo anoloan’izy ireo no nisy ny orkesitra sy ny proscenium, sehatra lava iray tena niasan’ny mpilalao. Farany, tao ambadiky ny sehatra, izay mitovitovy amin'ny lamosinay. Ireo mpanoratra tantara an-tsehatra grika malaza, avy amin'ny squirrel ny Aristophanesmandeha Sophocy y Euripides.
Acropolis of Corinth
Ny Akropolisy any Korinto
Na dia tsy mitovy amin’ilay tany Atena aza izy io, dia tena zava-dehibe koa izy io tamin’ny andro fahiny. Io no iray amin'ireo acropolises lehibe indrindra tany Gresy. Ny fiaviany dia niverina tany amin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i Kristy ary hita mibahana ny tanàna avy amin'ny tendrombohitra efa ho eninjato metatra ny haavony. Tsy tamin’ny andron’ny Grika na Romanina anefa ny ankamaroan’ny zavatra hitanao ao, fa an’ny Moyen Âge.
Na izany aza, mijanona ny fototra tempolin'ny aphrodite, ny tranobe manan-danja indrindra ao amin'ny complex. Tao anatiny dia nisy ny sarivongan'ny andriamanibavy sy ny hafa koa Eros y Helios, io mpiaro farany an’i Korinto io. Tsy hitany kosa ny Sisypheus, un tholos na tsangambato semicircular izay azo inoana fa natokana ho azy Zeosy na ARES.
Fa efa hita loharanon'i Pyrenees, marina fa teo ambanin’ny vata romanina. Toa nisy sarivongan’andriamanitra teo akaikiny Apollon ary, araka ny voalazan'ny angano, dia teo no nahavitan'i Bellerophon namelaka ny soavaly Pegasus.
Teatra Aso Acropolis
Rehefa nanomboka nandinika ny asan'ny acropolis ara-tantara ny mpikaroka, inona izany ary inona no nampiasana azy, dia tonga saina izy ireo fa tena manan-danja tokoa izany eo amin'ny fandrindrana ny tanàna. Gresy Klasika. Hita ao amin’ny acropolisy ao Aso koa izany, tanàna misy azy ankehitriny vorontsiloza, fa i Helena kosa tamin’ny andro fahiny.
Toa naorina tamin'ny taonjato fahafito talohan'i Kristy koa izy io, saingy, tamin'ity tranga ity, dia nataon'ireo Aeolian mpanjanaka avy any Mytilene. Tsy nofongarin’ny arkeology any Amerika Avaratra anefa izy io raha tsy tamin’ny faran’ny taonjato faha-XNUMX. Joseph Thacher y Francis H Bacon. Izy ireo dia naka ny ampahany maro hita tao amin'ny Museum of Fine Arts, Boston. Na izany aza, dia afaka mahita ny hafa ao amin'ny Louvre ary ao amin'ny Tranombakoka arkeolojika ao Istanbul.
Saingy, raha miverina any amin'ny acropolis of Asos ianao dia mbola afaka mitsidika ny sisa tavela amin'ny tempolin'i athéna, miaraka amin'ny fomba Doric, ny rindrina tranainy, ny necropolis, ny gymnasium ary ny teatra romanina. Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny agora, izay nanana a stoa na tribune misy andry, ary ny bouleuterion. Ity farany no toerana nivorian’ireo olom-pirenena mpitarika nanapa-kevitra ny amin’ny raharaha lehibem-bahoaka. Noho izany dia hitovy amin’ny kaongresin’ny depiote amin’izao fotoana izao, satria tanàna-panjakana izy ireo.
Acropolis of Pergamona
Ny Akropolisy Pergamôna
An'io tanàna grika tranainy io koa ankehitriny vorontsiloza. Ary koa, ao anatin'izany dia afaka mahita acropolis manan-danja ianao, ka izany no izy Lova eran-tany. Ny axe afovoany dia Tempolin'i Athena Nikephoros, naorina nanaraka ny kanônan’ny Doric. Teo anilany no nisy ny Biblioteca, izay, tamin'ny androny, no faharoa lehibe indrindra teo amin'ny tontolo fantatra taorian'ny an'ny Alexandria. Ary, tany amin'ny faritra avaratra, dia nisy ny Royal Palace eo akaikin'ny arsenal sy toby iray.
Teo atsimo kosa ny alitaran'i zeus izay, tsy isalasalana, dia tsangambato mahatalanjona. 36 metatra ny lavany ary 34 ny sakany ary tohatra lehibe no nidirana. Ankoatra izany, ny andry mafy dia nanohana ny valindrihana, voaravaka frieze izay maneho ny ady eo amin'ny andriamanitra sy ny goavambe.
Toy izany koa, ny akropolisy tao Pergamôna dia nanana be dia be Teatro Nisy olona iray alina tao. Tamin'ny fitongilanana 38 metatra dia nisy andalana 68 andalana. Ary, eo amin'ny tapany ambany, dia mifandray amin'ny terrasse mahavariana izay nampiasaina handehanana.
Etsy ankilany, na dia tsy an'ny acropolis intsony aza izy io, raha mitsidika azy ianao dia manoro hevitra anao koa izahay mba handeha any amin'ny Asclepion, izay tokony ho efatra kilometatra miala ny tanàna. Araka ny asehon’ny anarany, dia tempoly natokana ho an’ny andriamanitry ny Fitsaboana (Asclepius) izy io. Noho izany antony izany, dia nivory tao ny manam-pahaizana momba izany, anisan'izany ireo malaza Galien. Ankoatra izany, tena akaiky dia misy tempoly kely iray hafa natokana ho azy Telesforo, hygieia y no fanafody hanasitranana, zanak’i Asclepius sy andriamanitra kely momba ny fitsaboana.
Ho fehiny dia nohazavainay avokoa ny momba ny acropolis, inona izany ary inona no nampiasana azy. Saingy nasehonay anao koa ny sasany amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny Antiquity raha te hitsidika azy ireo ianao. Na izany aza, tsy maintsy milaza aminao izahay fa, amin'ny fanitarana, ny fitambaran'ny tranobe tranainy rehetra hita any amin'ny faritra ambony amin'ny tanàna dia antsoina indraindray hoe toy izany. Ohatra, ny an'ny Bratislava, Edinburgh o Constantinople. Ny fandehan'ny fotoana dia nanimba ny acropolis, sangan'asa an-tanàn-dehibe, saingy mbola toerana mahagaga izy ireo. Sahia mandeha any amin'izy ireo dia ho hitanao ny antony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Gresy » Acropolis, inona izany
Inona no hojerena any Bolgaria
Inona no hojerena ao Elche